Otu esi amata SEO ohere na saiti gi iji melite ogo na nsonaazụ ọchụchọ site na iji Semrush
Kemgbe ọtụtụ afọ, enyerela m ọtụtụ narị otu aka na ịwulite atụmatụ ha yana mezue ihu igwe nchọ ha n'ozuzu. Usoro a na-aga n’ihu:
Ọ bụ ezie na ị nwere ike iche na ị ga - eme nyocha ma hụ onye gosipụtara nsonaazụ, nke ahụ abụghị ụzọ dị ukwuu iji chọpụta ndị ndị asọmpi gị. Ihe kpatara ya bụ na engines ọchụchọ na-ahaziri peeji nsonaazụ njin ọchụchọ (SERPs) na onye nyocha ihe nyocha - nke ọma na nke ala.
Kwụpụ 1: Lelee Nhazi ngalaba Gị site na Okwu
Nzọụkwụ mbụ m na-eme mgbe m na-eme nyocha asọmpi bụ ịmata ebe m nọ n'ọkwa. Ihe kpatara nke a bụ ihe dị mfe easier ọ dịịrị m mfe iji na-ebuli na-akpali elu na Keywords na m ọkwá na ugbua karịa na-agbalị ọkwá na Keywords na m na saịtị ahụghị maka.
ọnọdụ - M na-amalite na ọnọdụ 4-10 ebe m nọ na peeji nke 1 ma ọ bụrụ na m nwere ike iru ọnọdụ 3, amaara m na m ga-eme ka okporo ụzọ m dịkwuo elu.
You’ll notice that I moved up on Bọchị Valentine n'asọmpi. That was a keyword that I worked on last month in preparation for Marketers that were doing research on social media contests… and it worked! I received thousands of visits by optimizing an older article and refreshing the data and images on it. I had even optimized the post slug to better target the keywords, changing “valentines-day-campaign” to “valentines-day-social-media-contests”.
Isiokwu mbu na listi a bụ n'ezie akara, yabụ enweghị m ntụkwasị obi na m ga-aga nke ọma ma ọ bụ merie okporo ụzọ ahụ. Ọ bụrụ na mmadụ na-achọ Acquire.io… eleghị anya ha chọrọ ezigbo weebụsaịtị.
Otú ọ dị, isiokwu nke abụọ - Ọbá akwụkwọ ọdịnaya - bụ otu na m nwere nnọọ mmasị ogo ogo na. Ọ bụ isi maka ọrụ azụmaahịa m ma enwere m obi ụtọ inyere ndị na-ere ahịa aka ịrụ ọrụ nke ọma ma rụpụta ọrụ nke ọma na ọdịnaya ha iji mee ka nsonaazụ ahịa pụta.
Echefula na ị nwere ike imerụ okporo ụzọ ọchụchọ gị niile ma ọ bụrụ na ị were peeji nke dị elu wee mebie njikarịcha ya maka otu isiokwu. Yabụ, ihe nke abụọ m na-eme bụ ịhụ ihe ọzọ peeji ahụ akọwapụtara maka ya site na ịpị URL dị na Semrush akụkọ. M na-ehichapụ ihe nzacha m niile wee dezie ndepụta ahụ site na ọnọdụ ya.
Rịba ama, na Njirimara SERP na enwere snippets, vidiyo, na nyocha. Achọrọ m ịhụ ma ọ bụrụ na etinyegoro m ihe ọ bụla nwere ike ịnyere aka na edemede m nke gbagoro.
M nwere á »zá» backlinks m peeji kará »‹ ka á »tá» several tá »of peeji nke ranking n'elu m. N'ezie, ụfọdụ n'ime ngalaba ndị ahụ nwere ikike ka ukwuu ka m wee nweta ọrụ m. Edere edemede dị elu na ibe ahụ na 2013, yabụ enwere m obi ike na m nwere ike ị nweta nsonaazụ kacha mma. Na, n’inyocha ndepụta nke isiokwu… ụfọdụ n’ime ha adịghịdị mkpa maka isiokwu ahụ ma ọlị.
Ọ bụrụ na ederede gị dị na blọọgụ gị, atụla ụjọ iweghachi ọdịnaya ahụ dị ka nke ọhụụ, na-edebe otu URL na slug. Maka na ị debelarị, ị chọghị ịgbanwe URL nke ibe gị!
I typically see an immediate boost in visits upon republishing and promoting the content but not an immediate change in the overall ranking. I typically revisit Semrush in 2 ka 3 izu ịhụ otú mgbanwe m metụtara na mkpokọta ogo maka otu URL ahụ.
If you’re serious about utilizing content to drive organic growth, be sure to check out Semrush's Ngwaọrụ Ahịa Ahịa ebe ị nwere ike ịhazi, dee, ma nyochaa ọdịnaya gị niile n'otu ebe.
Semrush ka e deghariri na aha ha isiokwu nchekwa data sitere na 17.6B ruo 20B. Afọ abụọ gara aga ọ gụnyere naanị isiokwu 2B - nke ahụ bụ Ọganihu 10x! Ha gbanwere atụmatụ ha:
Gbalịa Semrush Pro For Free!
Gbalịa Semrush Guru For Free!